पीडित बालिकालाई बहिनी सम्झी सहयोग गरेँ भन्दै दुर्गेशले लेखे यति लामो स्टा’टस !!
काठमाडौं । गायक तथा मोडल दुर्गेश थापाले अभिनेता पल शाह प्र’करणबारे नयाँ जानकारी दिएका छन्। उनले फेसबुकमा लामो स्टा’टस लेख्दै बालिकालाई बहिनी सम्झिएर सहयोग गरेको बताएका छन्।
उनले गल्ती पल शाहबाट नै भएको औं’ल्याएका छन्। हाल पल प्रहरीको हिरासतमा छन्। बाल गायिकाले जरबजस्ती क’रणीको जा’हेरी दिएपछि उनी प’क्राउ परेका थिए।
यस्तो छ दुर्गेशको स्टा’टस :नाबालिग बालिकालाई ल’लाई फ’काई गरी हे’रचाह र ख्याल गरेजस्तो गरेर स्वा’र्थ पुरा गर्ने काम गरिएको रहेछ । स्वार्थ पुरा भएपछि बेवास्ता गर्न थालियो । निकटको सम्बन्ध वि’कट बन्यो । बालिका एकोहोरो भइन् । नजिक ठानेको मान्छेबाट धोका पाएपछि वि’क्षिप्त बनिन् । माया प्रेमको खोल ओढेर आफूमाथि शो’षण भएको स्प’ष्ट रूपमा म’हसुस गर्न थालिन् । दिनदिनै उनको मानसिक अ’वस्था कमजोर हुँदै गयो ।
बा’लिकाले धेरै पटक मु’द्दा हाल्न कोसिस गरिन अरे, हामी सँगको भेटमा पलका म्यानेजरले त्यही बताएका थिए । मु’द्दा हाल्न जाँदा विभिन्न बहाना बनाएर फेरि केश रोक्न लगाइन्थ्यो रे । फेसबुकमा एउटा कुरा बालिकाले पिडामा लेखेर हालिन भने अर्को दिन त्यसलाई सफाइ दिन लगाएको सबैले देख्नु भएकै छ ।
१/२ महिना मिले जस्तो गर्ने फेरि बालिकालाई वास्ता नगर्ने अनि बालिका रुदै हिँड्न पर्ने अवस्था भएछ । पीडाले थि’चिएकी बालिकाले म्यानेजर सँग कुरा गरे पनि पलसँग मिलेर फकाउन खोजिन्थ्यो रे । पछि बालिकालाई विभिन्न बहानामा गाली गर्ने, बालिकालाई युट्युबमा हालेर तेरो बे’इज्जत गर्दिने जस्ता कुराहरू गर्ने र बालिकालाई गाली बेइज्जत गरेर हयारेसमेन्ट गर्ने जस्ता कार्यहरू भएछन ।
सहन स’कुन्जेल सहिन् र नसकेपछि आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूसँग गुम्सिएको मनका व्यथा सुनाइन् । सुमधुर सम्बन्धबारे सुनाउन जतिसजिलो छ त्यो भन्दा कयौँ गुणा गा’ह्रो छ टुटेको सम्बन्ध र समस्याबारे कुरा गर्न । कलिलो दिमागलाई शायद बिग्रँदो सम्बन्धले झ’न्झन् कम’जोर बनायो । त्यसैले उनी लगभग डिप्रेसनमा पुगिन् ।
उदाउँदो भविष्य अन्धकार देख्न थालिन् । त्यो अ’न्धकार भित्रबाट पनि उज्यालोको झिनो आशा बोकेर म लगायत उनले आफ्नो नजिक मानेका व्यक्तिहरूसँग आफ्नो पि,डा सुनाइन् र हामीबाट सहयोगको अपेक्षा गरिन् । शायद अभिभावक सोचेर होला किनकि म पल शाह जसले पि,डा दियो, ऊसँग पनि उत्तिकै निकट थिएँ । तर पलले यो विषयलाई ग’म्भीरतापूर्वक लिएनन् । नाबालिकाको पिडा अलिकति पनि महसुस गर्न सकेनन्/गरेनन् भन्ने हामीलाई लाग्यो । यही क्र’ममा मैले बालिकाले आफ्नै ज्यान फाल्ने जस्तो कुनै गलत कदम नलिओस् भनेर उसलाई सहयोग गर्ने सोच बनाएँ । जसले हामी बिचको राम्रो सम्बन्धमा झन् झन् दरार आउन थाल्यो ।
मैले पी’डित बालिकालाई बहिनी सम्झी सहयोग गर्ने अठोट गरेँ । हामीले गरेको छलफलमा बालिकाले आफ्नो पि,डा पनि सुनाएकी थिइन् । त्यो क्रममा हामीले उनलाई धेरै सम्झाएका छौ जुन कुरा सार्वजनिक भएको अडियो बाट हटाइ सु’नियोजित बनाएका रहेछन् । अरू नै कसैसँग भएको रकम लेनदेनको कुरा समेत मिसाएर भ्र’म पैदा गर्न खोजिएको छ सा’र्वजनिक अडियो (पैसा लेनदेन) को छलफलमा म उपस्थित पनि थिएन अडियो मा पललाइ झोला बोकाएर फिर्ता दाङ प’ठाउँछु भनिएको छ त्यो मेरो आवाज नभै स्वयम पलका म्यानेजर कृष्ण जोशीको हो त्यसपछि यो विषयमा म कहीँ कतै संलगन नरहेको सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ। भेटघाट कुनै ष’डयन्त्र गर्न होइन उनीहरू बिच भएका समस्याको समाधान खोज्नका खातिर मात्र भएको थियो जुन अडियो सा’र्वजनिक भयो त्यो करिब करिब ७ महिना पहिलेको हो ।
पीडित नाबालिकाको आ’रोप ग,म्भीर रहेकाले त्यो बारे बुझ्न पल सँग बुझ्न खोज्दा हामीलाई नै उनले दु’स्मन ठाने । पलसँगको सम्बन्ध जोगाउन हामीले एउटा बहिनी समानकी बालिका माथि भएको अन्यायलाई तिलाञ्जली दिन सकेनौँ । उनलाई न्या’यका लागि लड्न आँट र भरोसा दियौँ । यसलाई उनले आफू विरुद्धको जा’लझेल सम्झेर प्रहरीमा पल विरुद्ध जाहेरी परेपछि लगभग ७ महिना पुरानो अडियो लाई सार्वजनिक गर्दै पब्लिक सेन्टिमेन्ट जित्ने अस्त्र बनाइयो । जसले त्यी नाबालिकालाई न्यायको खोजी गर्नुपर्छ भन्नेहरूको पत्ता साफ गर्ने आ’शय राखियो । आफू विरुद्ध रहेका म्यानेजर कृष्ण जोशीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर हाम्रो विरुद्धमा बोल्न लगाइयो । जबकि केही महिना अगाडी पलले आफ्नो म्यानेजर लाइ हटाएका थिए । सायद यसरी अ’स्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न पाइन्छ भनेर होला उनैलाई पुन म्यानेजर बनाएर काममा राखियो । तपाईँहरू आफै बु’द्धिजीवी हुनुहुन्छ आफै बुझ्नुहोला किन त्यसो गरिएको रहेछ भनेर !
ज्या’न समेत लिने योजना बनाएको कपोलकल्पित कथा बुनेर मिडियामा उसलाई सार्वजनिक गराइयो । यस्ता विभिन्न हत कन्डा अपनाएर प्रहरीले छानबिन गर्नुपर्ने विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा गिजोल्नुसम्म गिजोलियो। पीडितको पक्षमा रहेका हामीलाई फसाई आफू उम्कन अनेक योजना बुनियो । हामी न्यायको पक्षमा छौँ । जसको छा’नबिन प्रहरी गर्नेछ र अदालतले अवश्य न्यायको पक्षमा अन्तिम निर्णय सुनाउनेछ भन्ने अपेक्षामा बसेका छौ हामीले हाम्रो तर्फबाट कानुनलाई सघाउनु पर्ने हरेक ठाउँमा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतमा सघाउन त’त्पर छौ । तपाईँहरूले दिएको तालि र गाली सबै स्वी’कार्य छ ।
२०७८ फाल्गुन १७, मंगलवार प्रकाशित 1 Minute 154 Views